Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha Jaaliyadda Galbeedka Australia oo casha sharf loogu sameeyay dalka Qatar
Gudoomiyaha Jaaliyadda Galbeedka Australia oo casha sharf loogu sameeyay dalka Qatar
Waxaa booqasho ku jooga dalka Doxa caasimadda dalka Qatar Halgame Adan Ibrahim (daqare) oo ah Gudoomiyaha Jaaliyadda Galbeedka Australiya ee Perth. Halgame Adan daqare ayay jaaliyadda Qatar ku soo dhaweysay casho sharaf ay ku kala warqaadanayeen.
Waxaa lagu furay shirka wacdi diini ah oo ku saabsanaa jihaadka uu shacabka S.Ogadenya ku jiro iyo waajibaadka ka saaran qofkasta oo dalkaa u dhashay. Sheekh Cabdulaahi oo kalmada ka akhriyay shirka ayaa si fiican uga hadlay marxaladda aynu mareyno waajibaadka saaran qofkasta oo muslim oo dalkaa u dhashay, isagoo ku tilmaamay wax lala yaabo inay dad culumo sheeganaya ay maanta horboodaan gumaysi ay gaalnimadiisa cadahay oo aan u baahnayn daliil iyo in loo qiil dayo.
Ka dib, waxaa qaatay hadalka gudoomiyaha jaaliyadda Doxa oo uga xogwaramay mudane Adan heerka waxqabad ee jaaliyadda Doxa iyo mashaakilaadka horyaala iyo qorshaha u dajisan. Intaa ka diba ayaa lagu soo dhaweeyay halgame Adan daqare oo u sheegay jaaliyadda inay ahayd Doxa meeshuu ka bilaabay halganka 1986kii kolkaasuu uu arday ka ahaa jaamacadda Qatar. Wuxuu uga xogwaramay halgame Aadan daqre in 1989kii markuu tagay Australiya ay ku ahaayeen 6ex qof oo kali ah jaaliyadda ka jirta dalkaa. Maantana waxay tahay jaaliyadda S.Ogadenya jaaliyadaha ugu xooga badan ee ka dhisan dalka Australia oo ku baahsan dhamaan Gobolada qaarada Australiya gaar ahaan Melbourne, Perth iyo Sydney. Wuxuu halgame Adan daqre si fiican uga xogwaramay doorka ay jaaliyadaha Australia ka qaataan halganka iyo siday u dhisan yihiin, isagoo xusay shirweynihii lagu qabtay sanadkii 2010kii Australia iyo guulaha uu ku soo kordhiyay halganka iyo sida looga taxgaliyo dalka Australia shirweynihii ka dib. Wuxuu kaloo xusay isku daygii Cabdi iley iyo kooxdiisa ay doonayeen inay Australia ku qabsadaan shirar dacaayad ah iyo siday u fashilyeen ee markii dambe loogu qasbay Cabdi iley inuu dalka ka boxo.
Kala warqaadashadii ka dib iyo cashadii, waxay labada jaaliyadood isla meel dhigeen inay xidhiidh sokeeye iyo hawl-wadaagnimo yeeshaan isla marhaantaana ka midoobaan mawaaqifta la xidhiidha iska caabinta gumaysi kalkaalka.